फेसबुकमा कोरोना अफवाह
विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को त्रासमा छ। चैत ७ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्दको घोषणा गरे। फागुन ११ गते सरकारले देशभर ‘लकडाउन’को निर्णय ग¥यो। देश पूरै ‘लकडाउन’मा हुँदा सामाजिक सञ्जालमा भने कोरोना भाइरस संक्रमण र यसबाट विभिन्न अस्पतालमा नेपालीको मृत्यु भएका गलत सूचना (अडियो र भिडियो) भाइरल भएका छन्। यसरी अफवाह फैलाउनेमा क्रिस्चियन धर्मगुरुदेखि अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीसम्म रहेका छन्।
‘ओई कोरोना तँ मरिजा ! तेरो शक्तिलाई निष्क्रिय पार्छु। यशुको नाममा। चाइनाका दाजुभाइ बाँच्नेछन्। परमेश्वरको कृपा चाइनामाथि छ। अनि संसारमा जति पनि पीडित छन् सबै निको भइजा। यशुको नाममा। यशुको नाममा डराउनेहरू नडराओ ! रेका लाराबा, सान्दा लाराबा, लाराबाखाराबा सान्दा, भागिजा यशुको नाममा !’
कोरोनाबारे फेसबुकमा अफवाह फैलाउनेको कमी छैन। कुनै गलत सन्देशमाथि लाइक र कमेन्ट गर्नु हुँदैन। कसैले केही भन्दैमा त्यो सत्य हुँदैन। केही कुरा सुनिसकेपछि विश्वासिलो स्रोत खोज्नुपर्छ।
एक मिनेट एक सेकेन्डको यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। केशवराज आचार्यले यशुका अनुयायीलाई कोरोना भाइरसले छुन नसक्ने भन्दै यस्तो प्रवचन दिएका हुन्। पोखरा महानगर–१९ बस्ने आचार्यले क्रिस्चियन धर्मका अनुयायीमाझ प्रवचन दिएको भिडियो फेसबुकमा भाइरल भएको हो। आचार्यले सोझासाझा मान्छे भेला गरेर प्रभु यशुलाई प्रार्थना गरे कोरोना भाइरसले नछुने भन्दै भ्रम फैलाएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई खोजी सूचीमा राखेको थियो। जुम्ला स्थायी घर भएका आचार्यलाई कास्की प्रहरीले चैत १० गते पोखराबाट पक्राउ गरेको छ। तालचोकका स्थानीयलाई जम्मा पारेर यशुका अनुयायीलाई कोरोनाले नछुने भन्दै आचार्यले प्रवचन दिएका थिए।
‘अँ हिमाल, तिमीलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सुनाउन फोन गरेको है...!’
यही आवाजबाट फेसबुक म्यासेन्जरमा गलत सूचना फैलाउने विवेक थापा पक्राउ परिसकेका छन्।
उनले नर्भिक अस्पतालमा नौ जनालाई चेक गर्दा छ बिरामीमा कोरोना देखिएको र नेपालमा कोरोना फैलिसकेको गलत सूचना फैलाएका थिए। उनले अडियोमा यो ‘फेक’नभएको दुई पटकसम्म बताएका छन्। गलत सूचना दिँदा उनले नर्भिक अस्पताल पुल्चोकमा भएको भनेका छन्।
नर्भिक अस्पताल पुगेका र यसको बारेमा सुनेकाले यो गलत सन्देश भन्ने सहजै थाहा पाउँछन्, किनकि नर्भिक अस्पताल थापाथलीमा छ। घरनजिकै बस्ने स्टाफको हवाला दिएर उनले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने प्रयास गरेका हुन्। अझ उनले टिचिङमा पनि केही मान्छेलाई कोरोना लागेर मरेर जलाउन लगेको जस्तो गलत सूचना फैलाएका छन्।
यो गलत हल्ला फैलाउने रामेछाप घर भई हाल भक्तपुर सिपाडोल बस्ने थापालाई प्रहरीले चैत ८ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षत्रीका अनुसार उनीमाथि अनुसन्धान जारी छ।
यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि नर्भिक अस्पतालले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेर खण्डन गर्नुपरेको थियो। चैत ८ गते अस्पतालका नायव महाप्रबन्धक आरपी मैनालीले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै नर्भिकमा कोरोनाका बिरामी भेटिएको भन्ने भ्रामक समाचारले आश्चर्यचकित भएको बताएका थिए।
‘आज विशेष सैन्य हेलिकप्टरहरूले देशभरि आकाशमा कोरोना भाइरसविरुद्ध कीटनाशक औषधि छर्कन्छन्...।’
२९ सेकेन्डको अर्को एउटा अडियो यसरी सुरु हुन्छ। समाचारकै शैलीमा वाचन गरिएको यो अडियोमा रातको समयमा सैन्य हेलिकप्टरले कीटनाशक औषधि छर्कने हवाला दिइएको छ। रातको समयमा हेलिकप्टरको आवाज सुन्दा औषधि छर्किन लागेको थाहा पाउन आग्रह पनि गरिएको छ। अडियोमा रातको समयमा घरबाहिर नबस्नसमेत भनिएको छ।
यही गलत सन्देश पुरुष आवाजमा मधेशी लवजमासमेत रेकर्ड भएको छ। ‘हेलो..जतिजना पनि यो म्यासेज सुन्नु हुन्छ भने कृपया विचार गरेर आफ्नो झ्याल ढोका जतिहरू छ नि त्यो सप्पै कृपया लगाइहाल्नुहोला..’ भनेर यो अडियो सुरु भएको छ। राति १२ बजेतिर हेलिकप्टरबाट एन्टिडोर भन्ने औषधि छर्किने कुरा यसमा उल्लेख छ। त्यो औषधि छर्किंदासबै झ्याल र ढोका बन्द गरेर सुत्न आग्रह गरिएको छ। सन्देशमा अरूलाई पनि म्यासेज सेयर गर्न भनिएको छ।
गलत सन्देशसमेत हिन्दी भाषाबाट नेपालीमा उल्था गरेर भाइरल बनाएको देखिन्छ। यो हेलिकप्टरबाट औषधि छर्कने गलत सन्देश भारतमा ह्वाट्स एपमा फैलिएको एकसातापछि नेपाली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको हो। नेपालका ह्वाट्स एप कम चलाउने भएकाले हिन्दीबाट नेपालीकरण गरेर फेसबुकमा भाइरल बनाइएको देखिन्छ।
‘म र मेरो आमा टेकु अस्पताल आएको छौँ। मेरो खुट्टामा कुकुरले टोकेको भएर त्यो घाउ बल्झिन लागेको भएर म यहाँ डा. अजय पराजुलीलाई भेट्न आएको हुँ...।’
टिकटकमा बनाइएको अर्को एक गलत भिडियो सन्देश यसरी सुरु हुन्छ।
उनले यो सन्देश फेसबुकमा पढेको भन्दै सबैलाई फैलाउन आग्रह गरेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता क्षत्रीका अनुसार यो भिडियोमा गलत सूचना दिने व्यक्तिले जुन डाक्टरको नाम लिएका छन्, ती डाक्टरसमेत टेकु अस्पतालमा कार्यरत छैनन्। यो भिडियो अमेरिकाबाट अपलोड भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ। भिडियो भाइरल भएर प्रहरीले उनलाई खोजी सूचीमा राखेपछि पाण्डेले भने फेसबुकबाटै आफूले गलत सूचना बाँडेको भन्दै माफीसमेत मागेका छन्।
कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको छ। यस्तो भाइरस संक्रमण भएको कुरा अस्पतालले लुकाउनै सक्दैन। सूचना र प्रविधिको युगमा अस्पतालको लुकाउने प्रयास कसरी गर्ला र ? यो असम्भव छ। अझ कोरोना संक्रमण लुकाएर लुक्ने खालको पनि छैन। किनकि, पूरा तीन महिनाको अवधिमा यो विश्वका १ सय ८९ देशमा पुगिसकेको छ।
सरकारले यो विश्वव्यापी संकटसँग जुध्न देशभर लडकडाउन गरेर आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यस्ता हल्लाका पछाडि लाग्नु हुँदैन।
भीडभाडबाट टाढै बसेर, साबुन पानीले बारम्बार हात धोएर, समय–समयमा स्यानिटाइजर प्रयोग गरेर, संक्रमित बिरामीलाई भेट्दा वा हेरचाह गर्दा मास्क र पञ्जा लगाएर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका यस्ता अफवाहबाट बच्ने ठ्याक्कै उपाय छैन। तर, गलत सन्देशबाट बच्न व्यक्ति सचेत भए मात्र पुग्छ।
यस्ता गलत सन्देश कसैले तपाईंको म्यासेन्जरमा पठाए त्यसलाई अन्य साथीसमक्ष फरवार्ड नगर्नुहोस्। यस्ता सन्देशमाथि लाइक र कमेन्ट पनि नगर्नुहोस्। अझ यस्ता सन्देश सेयर त गर्दै नगर्नुहोस्। यस्ता कुरालाई तपाईंले लाइक, कमेन्टसँगै सेयर गर्नुभयो भने गलत कुरा अझ फैलिन्छ। कसैले केही भन्दैमा त्यो सत्य हुँदैन। केही कुरा सुनिसकेपछि विश्वासिलो स्रोत खोज्नुहोस्।
समाजलाई त्रसित पार्ने मनसायबाट यस्ता अडियो र भिडियो बनेका देखिन्छन्। फेसबुकमा धेरै लाइक, कमेन्ट र सेयरको लोभलेसमेत कतिपयले यस्ता सन्देश तयार पार्छन्। यस्तो हल्लाले समाज आतंकित हुन्छ तर ठूलो फाइदा कसैलाई छैन। अरूलाई आतंकित बनाएर रमाउन चाहनेले यस्तो गरेका हुन सक्छन्।
यस्तो अडियो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्नेलाई कारबाही हुन्छ। नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ मा झुटा अफवाह फैलाए एक वर्षसम्म कैदको सजाय हुने उल्लेख छ।अपराध संहिता दफा ७० को उपदफा (१) र (२) मा अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही हुने व्यवस्था छ। संहिताको दफा ७० को उपदफा (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हूलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको समुधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए र नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचारप्रसार गर्न वा नारा जुलुस गर्न हुँदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, दफा ७० को (२) मा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।